Michael Keating oo hadal yaab leh ku bah-dilay XASAN SHEEKH.!! - Caasimada Online
Home Warar Michael Keating oo hadal yaab leh ku bah-dilay XASAN SHEEKH.!!
Michael Keating oo hadal yaab leh ku bah-dilay XASAN SHEEKH.!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Danjiraha QM u qaabilsan arrimaha Somalia Michael Keating, ayaa arrin laga xumaado ku tilmaamay in dowlada Somalia ay qaatado go’aano aysan la qabin Beesha Caalamka.
Michel Keating, waxa uu sheegay in geesi socodka Somalia uu yahay mid khuseeya dhammaan dalalka garan taagan Somalia, waxa uuna taasi sabab uga dhigay dowlada Somalia oo aan wali gaarin isku filnaan iyo Siyaasada Somalia oo aan caga fiican ku taagneyn.
Waxa uu sheegay in joogitaankooda Somalia ay tahay mid ku xiran Somalia oo ka caga qaada halka ay iminka taagan tahay, isaga oo meesha ka saaray in dowlada Somalia aysan u nugleyn sharciga lagu maamulo dalka, sidaa aawgeedna loo baahan yahay in garan joogta ah loo muujiyo Somalia.
Madaxweynaha Somalia ayuu sheegay in looga baahan yahay in tallaabo waliba oo uu qaadayo la wadaago xubnaha garab taag
an ee Beesha Caalamka ka socda, waxa uuna carab dhabay inay adag tahay in tallaabo aan lala wadaagin Beesha Caalamka ay dhaqan gasho.
Wuxuu tilmaamay in go’aanada qaar oo uu qaadayo Xassan Sheekh ay lidi ku noqonkarto Siyaasada qunyar socodka ah ee ka jirta Somalia, sidaa aawgeedna ay mudan tahay in dhex dhexaad ay ka noqdaan tallaabooyinkaasi si aysan u dhicin khilaaf iyo kala aragti duwanaansho sabab u noqota dib u laabashada Somalia.
Waxa uu sidoo kale, dhaliilay qaabka uu u shaqeynaayo Guddiga Doorashada waxa uuna cadeeyay in howlaha qaar ee khuseeya doorashada ku fududaaden, balse loo baahan yahay in xal degdeg ah laga gaaro.
Go’aanka dib loogu dhigaayo doorashada Somalia ayuu sheegay inay tahay mid u gaar ah Xassan Sheekh iyo dowladiisa, waxa uuna dhaliilay degdegta lagu meelmarinaayo go’aankaasi.
”Inkastoo beesha caalamku ay dhowreyso hanaanka siyaasadeed ee Somalia, hadana waxaan dhaliil ka muujineynaa la tashi la’aanta dowlada Somalia, waxaanu diyaar u nahay inaan aqbalno wax waliba oo ay ku heshiyaan Soomaalida marka laga soo tago dhaliisha aan qabno”
Ugu danbeyntii, Mr Michel Keating, ayaa amaanay qaabka ay iskula jaanqaadayaan Madaxda Madasha Qaran ee ku shirsan magaalada Muqdisho.